Dawladda Itoobiya oo sheegtay go’aan La Xiriira Shidaalka laga helay Dhulka Soomaalida iyo Qorshaha uga degsan | KALSHAALE
Dawladda Itoobiya oo sheegtay go’aan La Xiriira Shidaalka laga helay Dhulka Soomaalida iyo Qorshaha uga degsan
Dec 6, 2018 - 10 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Dowladda Ethiopia ayaa shaacisay in muddo seddex sano ah lagu soo gabogabeynayo qorshaha soo saarista Shidaalka laga helay deegaanka Soomaalida, kadibna la bilaabi doono iibinta shidaalkaasi.
Waxay taasi ka dhigan tahay in seddex sano kadib dowladda Ethiopia ay bilaabeyso dhoofinta Shidaalka laga helay deegaanka oo tijaabooyin kala duwan maraya.
Agaasimaha waaxda maamulka shatiyada shidaalka ee wasaaradda Macdinta Qasala Tadese ayaa shaacisay in ka hor inta aan lasoo saarin shidaalka in marxalado kala duwan la marayo, kadibna uu bilaaban doono iib geynta shidaalkaasi.
Waxay sheegtay “in la qodayo boqollaal ceel oo kale isla-markaana la fulinayo mashaariic waaweyn oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo fududeynayo shidaalka in muddada looga tala galay dalku uu ku soo saaro.”
Qasale Tadese, ayaa sidoo kale sheegtay inay baaritaan shidaal ka bilaabi doonaan deegaano kale oo Ethiopia ka tirsan, islamarkaana an lagu ekaan doonin kaliya deegaanka Soomaalida.
Dr Aby Axmed ayaa horey u shaaciyay in Ethiopia ay shidaal badan soo saari doonto, taasi oo dhaqaalaha qeyb weyn ka qaadaneyso, waxaana la qorsheynayaa in maalintii lasoo saaro 450 Fuusto oo shidaal ah.
shidaalka ogaadeeniya wuxuu kuyaalaa ilaalo oo godey ujirta 70 km kakalana wxuu kuyaalaa shilaabo ,xadka soomaliyana ujira 100 km,hadab axagee laga dhoofinayaa ,shidaalka ,wali layskuma afgaran
12 million waye dadka kilil5 hadaba dadkaas wa iney helaan boqolkiiba 40%,
dadkan absame waa somali nobles
sh cali suufi
markaan dhaho dadku dhaho dadku waa absame oo magaca badashey yaad ilayaabtaan
admiral maxamed cimar cusmaan
cabdirashiid cali suufi
bare aadan ducaali
war kudara liiska
waxad ilwday ninki ugu mihiimsana cigaal shiidaad kudar
Reer Baadiyihii Naagaha iyo geela kala dhicijirey miyaad na bareysaa.
Sayidka ayaan ka gartey oo ku dhintey Boondheere 1920, asagoo xoreynhayo Xamar.
Shariga Caalamka wuxuu dhigahayaa inaan dhul xoog lagu heysto laga qodikarin wax shidaal ah, ilaa Shacabka degan deegaankaas la siin hayo xoriyad ay isku maamulaan.
Waa looting waxa Ethiopia ka waddo Dhulka Somaligalbeed, meel kastana waan ka sheegeynaa.
Dabshid daanyeer xaasid.com
Beryahaan abtirsi ayaad ku jirtaa. Wax dheef miyaa la sheegay. Reerku wexey badan jireen marka hunguri la sheego.
Laandheere waxaan idiin qirayaa markaad ina ileey luf luf amxaaro xoog uga soo deysaan xabsiga.
Marka lasheegi tago badanaa oo tayo yaraa ma abooraa.
Axmed somali ayaad hilmaamtay.
Sheekh axmed deheeye ayaa yaabay.
Garqaad adeer, haddii dhiigiisa layga miiro QALAF waa ii dhammaatay. WBT
ASC garqaad ina iley sow iyagu maxidhin Mar horaa lasoo deyn lahaa e ogadeen buu uxidhanyahay